Free online ọrụ. Ngụkọta oge nke welded metal steepụ na a bowstring zigzag
Ngụkọta oge nke metal steepụ na a bowstring zigzag
Ngụkọta oge nke ogologo steepụ zigzag metal bowstring
Ngụkọta oge nke ewu metal steepụ na a bowstring zigzag.
Ịchọpụta ego nke profaịlụ anwụrụ eriri.
N'akuku nke nchepụta nke n'ọkwá.
Area Materials nzọụkwụ.
Nwere ikwu maka adaba steepụ.